DEGDEG: Muwaadin Soomaaliyeed oo si fool xun loogu dilay dalka K/Afrika – Balcad.com Teyteyleey
DEGDEG: Muwaadin Soomaaliyeed oo si fool xun loogu dilay dalka K/Afrika
Magaalada Port Elizabeth Ee Dalka Koonfur Afrika waxaa goor dhow lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed, kaddib markii koox burcad ah oo dalkaasi u dhalatay ay nafta uga qaadeen dhagax.
Allaha u naxariistee marxuumka oo lagu magacaabo Mubashar Axmed Raabi ayaa u geeriyooday dhaawacyo culus oo ka soo gaaray dhagxaan loogu dhuftay madaxa iyo qeybaha muhiimka ah ee jirkiisa isla markaana muddo saacado ah yiilay wadada dhexdeeda.
Ciidamada Booliska magaalada Port Elizabeth oo saacado kaddib soo gaaray goobta ayaa halkaasi ka qaaday meydka marxuumka, iyadoo kooxihii falkaasi ka dambeeyayna ay halkaasi ka baxsadeen.
Lama oga ilaa iyo iminka sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka muwaadinka Soomaaliyeed, hase yeeshee saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadaasi xanuunka badan ee loo geystay wiilkaasi.
Dhinaca kale dilalka loo geysanayo Soomaalida degan dalka Koonfur Afrika ayaa soo badanaya isla markaana muddo dhowr sanadood ah socday ayaanay jirin cid wax ka qabatay, inkasta oo ugaarsiga lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed siyaabo kala duwan uga dhacaan dalkaasi.
The post DEGDEG: Muwaadin Soomaaliyeed oo si fool xun loogu dilay dalka K/Afrika appeared first on Ilwareed Online.
Muhaajiriin Soomaali ku jirto oo laga badbaadiyay xeebaha Talyaaniga + Sawirro
Shaqaalihii ugu badnaa oo laga eryay Madaxtooyada Soomaaliya (Waa maxay sababta?)